About Us - Shenzhen JYMed Teknolojia Co., Ltd
Peptide tsara kokoa ny fiainana tsara kokoa
Shenzhen JYMed Technology Co., Ltd dia avo-teknolojia orinasa anjara amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, orinasa mpamokatra entana, sy ny varotra ny vokatra ara peptides anisan'izany ny mpanao fanafody ilaina peptides, tarehy peptides, sy ny fanao peptides ary koa ny zava-mahadomelina peptide vaovao fampandrosoana. JYMed roa-nanana sampany tanteraka: Shenzhen JYBio fanafody Co., Ltd sy Hubei JY fanafody Co., Ltd, izay eo-dalam-panorenana.
【R & D foibe】
JYMed ny R & D foibe, miorina ao Shenzhen, dia nametraka ho an'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny fanafody vaovao akora, peptide APIs sy mitombina vokatra. Ny foibe dia fitaovana amin'ny maoderina peptide synthesizer, lehibe-fahaiza-manao preparative fanadiovana rafitra, ary feno fandalinana fitaovana ao anatin'izany MS, HPLC, GC, UV, IC sns ny R & D foibe ihany koa dia manome ny teknolojia fanohanana ho an'ny vaovao fanafody hita sy ny orinasa mpamokatra entana dingana nafindrany.
JYMed manana API peptide efatra famokarana andalana ao Nanjing araka ny FDA cGMP fanajana, ary ny roa vita levitra famokarana biolojika andalana ao Shenzhen ara-barotra izay afaka manome jazakely ny antontan-peptide injectables injectables fahafahana kely sy mandry-maina vovoka cGMP vokatra eo ambany tari-dalana. Ankoatra izany, isika fampaherezana kosa famokarana andalana enina ambin'ny folo ho an'ny peptide API ao amin'ny Xianning, faritanin'i Hubei, Sina, izay ho iray amin'ireo lehibe indrindra peptide API orinasa mpamokatra entana fototra any Shina.
JYMed feno sy mahomby dia manana indostria peptide rafitra, afaka manome Comprehensive peptide fanompoana, anisan'izany ny Cro / CMO / CDMO / OEM sy Regulatory raharaha fanohanana. Mba ho azo antoka, tsy miankina ary ny mpamatsy reactive ho an'ny peptides!
● mpiasa 315 ny firenena
● 2 RD laboratoara (Pingshan, Nanshan)
● 3 orinasa mpamokatra entana, trano
● APIs, Nanjing Lishui, Jiangsu, 4 famokarana andalana amin'ny fanarahana FDA
● APIs, Xian'ning, Hubei, 16 famokarana andalana ao amin'ny fanarahana FDA (-dalam-panorenana)
● Vita vokatra, 2 levitra andalana ao Shenzhen Pingshan, Guangdong
● 7 entana nanaiky Anda ho CFDA, 5 entana eo ambany nametrahana
● 1 entana nanaiky IND ho CFDA
● 1 entana nametraka VMF (US-FDA) ary nahazo taratasy fanamarinana CEP